Mapurisa neMakanzura Voita Huori Hunosemesa kuNyamakate, Hurungwe
NYAMAKATE, HURUNGWE —
Chirongwa chekuyamura varimi nembeu nefotireza chePresidential Inputs Scheme chinonzi hachisi kufamba zvakanaka kuNyamakate, Hurungwe mudunhu reMashonaland West nepamusana pehuori huri kuitwa nemakanzura nemapurisa.
Vamwe vagari vemubhuku rinonzi Mike mu Ward 7 vanoti havana kuwana mbeu nefotireza izvo zvinopihwa imba yega yega nedonzvo rekupedza nzara munyika.
Mumwe mugari wemu Wadhi 7, Muzvare Betty Phiri, vanoti vari kushayiswa mbeu nefotireza mushure mekunyorwa mazita nekuda kwakanzura, VaJealousy Mateesanwa veZanu PF, vavanoti vari kuita zvehuori nevamwe vebato ravo.
Muzvare Phiri vanoti kanzura nemunyori wavo vakatora mabhegi makumi masere nemanomwe ndokuaviga.
Muzvare Phiri vanoti vakakwidza nyaya yefotireza nembeu kumapurisa epaMakuti nekuti vainge vanyorwa mazita avo asi vasina kupihwa mbeu nefotireza asi mapurisa hapana zvavari kuita.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemunzvimbo iyi, VaTichaona Sengwe, avo vanoti kunyange vakanomhan’ara nyaya iyi kumapurisa ekuMakuti, hapana chiri kuitwa sezvo vari kutora mbeu dzavo vachiti vari kudya nemapurisa.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita anoti dambudziko riri kuita mapurisa ndere kuti ari kupihwa mbeu nefotireza nakanzura izvo zvinoita kuti vasaferefete nyaya yehuori hwakanzura zvakanaka.
Asi kanzura Muteesanwa vanoti mapurisa vanhu vari muwadhi mavo nekudaro zvakakodzera kuti vawane mbeu nefotireza zvinopihwa vamwe.
Kanzura Muteesanwa vanoti hapana nyaya sezviri kutaura vamwe vagari sezvo mapurisa anenge aripo pese panopihwa vanhu mbeu nefotireza vakachengetedza motokari dzinenge dzichitakura mbeu.
Kanzura Muteesanwa vashoropodza vamwe vagarii vachiti vanopinza nyaya dzezvematongerwo enyika pane zvose zvinenge zvaitika muwadhi vachiti mweya wakaipa.
Mupurisa ari kuferefeta nyaya yekubiwa kwembeu nefotireza pamapurisa
epaMakuti, VaTinashe Shindi, vanoti vachiri pakati pekuferefeta nyaya
Pasi pechirongwa ichi, imba yega yega inopihwa masaga maviri efotireza nechipaketi chimwe chete chembeu chinorema makirogiramu gumi kubva kumutungamiri wenyika.
Fotireza nembeu zvinogoverwa vanhu nebazi redura renyika reGrain Marketing Board, GMB.
Kanzura wenzvimbo ndiye anonyora mazita ayo anoendeswa kuGMB kuti munhu agozowana mbeu nefotireza izvi.
Vagari vakawanda venzvimbo iyi vanoti mazita avo anonyorwa oendeswa kuGMB asi hapana chavanowana vachiti vakuru vakuru vebato reZanu PF munzvimbo iyi ndivo vanotora mbeu dzinenge dziri dzavo.